BBCSomali.com/mobile - BBC News Somali
Cinwaanka BBC Mobile waa
Cinwaankaas ku keydso ‘bookmarks/Favorites’ si aanad ugu baahan in aad dib u garaacdo, mar kasta oo aad barta soo booqato.
Suntashadu waxay kuu kaydisaa baraha aad jeceshahay si ay kuugu sahlanaato inaad mar kale booqatid. Marka aad isticmaalaysid BBC Mobile dooro ‘Bookmark’, ‘Add bookmark’ ama ‘Favourites’ oo laga helo menu-ga telefoonkaaga.
Si aad toos ugu tagtid BBC Mobile, menu ka dooro ’Bookmarks’ ama ’Favourites’. Si aad faahfaahin kale oo ku saabsan suntashada aad u hesho, eeg buugga la socda Mobile-kaaga.
- Qaado macluumaad jumlo ah. Haddii aad saxiixdo heshiis bishii ama maalintii aad qiime go'an bixinaysid waxaad xadddidi doonta kharash-ka bil walba kaaga baxa adeegsiga internet-ka mobile-ka, weliba haddii aad tahay qof si aad ah u isticmaala. kala xiriir shabakaddaada telefoonka wixii tafaasiil dheeraad ah.
Waan soo dhoweynaynaa wixii jawaab ka yimaad adeegyada mobile-ka.
Fadlan ogsoonow kama jawaabi karno dhammaan farriimaha na soo gaara. Ra'yi, wax weydiin ama talo soo jeedin waxaad email ugu soo diri kartaa: somali@bbc.co.uk
Fadlan ogow in cinwaadkan email-ka uu yahay mid loogu talo galay wixii jawaab ka timaad adeegga mobile-ka BBC.